Fikambanana Tany: toerana ivelan’i Madagasikara ny ZES | NewsMada
Fikambanana Tany: toerana ivelan’i Madagasikara ny ZES
Ho an’ny fikambanana fiarahamonim-pirenena Tany, “tsy ananantsika fiandrianana ny fametrahana ny faritra toekarena manokana (ZES). Heverina ho toy ny tany tsy ao anatin’ny sarin-tany intsony ivelan’i Madagasikara izany”.
Maneho hevitra mikasika ny Faritra toekarena manokana (ZES) ny fikambanana Tany, miaro ny zon’ny Malagasy amin’ny lafiny fananan-tany, nankatoavin’ny fitondrana ankehitriny ny lalàna mifehy azy. Manaitra ny sain’ny rehetra ity fikambanana fiarahamonim-pirenena (OSC) ity satria tsy hanana ny fiandrianany intsony ny teratany malagasy, ao anatin’ireny ZES ireny, sady ho voailika tanteraka. Raha raisina ny and.59 sy ny faha-73, amin’ilay lalàna nataon’ny fitondrana, lazaina fa “tondroina any ivelan’ny firenena amin’ny lafiny haban-tseranana ny ZES”,…, ary sokajina ho fanondranana entana any ivelany ny entam-barotra na ny vokatra rehetra avy eto Madagasikara alefa ao aminy,…”. “Ny famaritana ny fepetra, hiandraiketan’ny fahefana mpandamina ny ZES ny fitantanana ny ZES eto Madagasikara, antsoina hoe Azes. Mahaleo tena amin’ny fitantanana sy ny vola ity Azes ity”.
Tsy nisy tatitra ny fahombiazan’ny ZES
Efa nanao sonia fifanarahana ZES tamin’ny firenena vahiny roa, i Maorisy (marsa 2016) sy i Sina (marsa 2017), ny filohan’ny Repoblika teo aloha, Rajaonarimampianina. Nisy fivoriana mikasika azy koa tany Antsiranana, ny febroary 2018 teo, ka manodidina ny 20 ny mpandraharaha vahiny nantsoina avy any La Réunion, avy any Sina, avy any Maorisy, avy any Malezia, avy any Dubai, sns. Ho an’ny fikambanana Tany, “tsy nanao tatitra ny fahombiazana sy ny vokatra tsara nateraky ny ZES natao tany Afrika ny fikambanana iraisam-pirenena. Tsy nisy fampitahana natao mikasika ny fomba ZES miohatra amin’ny Fampiasam-bola vahiny mivantana (IDE). Tsy nahavita nisintona mpampiasa vola koa ny sahan’i Ehoala any Taolagnaro na nampidinina mora vidy aza ny hofan’ny tany, nefa noroahina tsy mahazo mamboly sy miompy ny mponina, nanomboka ny taona 2009”.